I-Meizu 16s: amanqaku, uyilo kunye nexabiso le-android enexabiso eliphantsi | I-Androidsis
UNerea Pereira | | Meizu
Asikokokuqala sithetha nawe malunga Meizu 16s, Iflegi elindelweyo yenkampani yaseAsia eya kuthi ibonakalise ukuxelela malunga necandelo elikhulu lokufota. Ukulinda kudala, kodwa ekugqibeleni sinokuqinisekisa zonke iinkcukacha zoyilo kunye neempawu zale fowuni intsha ye-Android ephezulu ngexabiso lokungqisha. Kwaye, kwinkomfa yoonondaba, inkampani esekwe eShenzhen iyazise ngokusemthethweni le fowuni.
Sithetha ngemodeli emele iveze isikrini esikwi-intshi ezi-6.2, ukongeza kumyinge wescreen ofikelela kuma-91 epesenti ngenxa yokuba neefreyimu ezingaphambili. Kwaye ulumke, akukho mkhondo wenotshi ukuze ungaphuli ubuhle Isikrini se-Meizu 16s. Makhe sibone ezinye iinkcukacha zobugcisa bale modeli inomdla eza kuza ngexabiso elinomtsalane kakhulu.
Uyilo kunye neempawu zeMeizu 16s emva kwengcaciso-ntetho yayo esemthethweni
Njengoko besitshilo, sithetha nge isixhobo sepremiyamu. Ngale ndlela, umzimba we-Meizu 16s wenziwe ngezinto ezintle zokubonelela ngokugqitywa komgangatho kunye nemvakalelo enkulu esandleni. Kwaye inyani yokuba inobunzima be-7.6 mm kuphela kunye nobunzima be-165 gram, yenza le modeli ibe sisiphelo esilawulekayo. Lumka, i-Meizu 16s sisixhobo esinezixhobo ezikhuphisana ngokwenene.
Ukuqala, sifumana isikrini esenziwe yipaneli ye-Super AMOLED ene-6.2-intshi idiagonal efikelela kwisisombululo esipheleleyo se-HD +. Kule nto, kufuneka songeze iprosesa Qualcomm Snapdragon 855 Kunye ne-Adreno 640 GPU kunye neenguqulelo ezimbini ezine-6 ​​okanye i-8 GB ye-RAM yokubonelela ngokusebenza okungafaniyo. Ewe, siya kuba neenguqulelo ezimbini ezine-128 kunye ne-256 GB yokugcinwa kwangaphakathi, ukucwangciswa okungaphezulu kokwanelisa iimfuno zakhe nawuphi na umsebenzisi.
Ifowuni, efika nayo I-Android 9 Pie Ngaphantsi kwengalo, inenkqubo yeekhamera ezimbini ezine-48 megapixel sensor ezimbini ezisayinwe nguSony (ezimbini ze-IMX 586 kunye ne-IMX 350 sensors) ukubonelela ngecandelo lokufota eliphantsi. Inxalenye yombulelo kwinkqubo yayo yokuzinzisa umfanekiso, imo yasebusuku kunye nekhamera engaphambili engama-20 ye-megapixel enolwazelelo lobuso kunye nemowudi ye-HDR +.
Malunga nomhla wokumiliselwa kunye Ixabiso leMeizu 16s, Zonke iinguqulelo ziya kufikelela kwintengiso yaseAsia ngo-Epreli 28 ngexabiso le-3198 yuan, malunga ne-430 euro yokutshintsha imodeli nge-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi, i-3498 yuan, malunga ne-490 ye-euro yokutshintsha, kwimodeli nge-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yememori yangaphakathi, okanye i-3998 yuan (malunga ne-550 euro yokutshintsha) yenguqulo yeevithamini engakumbi ene-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Meizu » I-Meizu 16s sele iyinyani. Sikuxelela zonke iinkcukacha